musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Toki Air inojoinha Sabre: Iyo itsva Tokyo yepakutanga
Airlines • Dzvanya apa kana iri pepanhau rako!
Radixx, kambani yeSaber uye inotungamira ndege kutengesera software mupi, nhasi yazivisa kuti kambani yapinda muchibvumirano cheiyo yakazara Radixx chigadzirwa suite neTOKI AIR, inotangisa-yakachipa-inotakura inotakura iri muJapan's port guta, Niigata. TOKI AIR ichatanga kutarisisa zano rayo pamusika wedunhu wekuzorora pamwe nendege dzinobva kuNiigata Airport kuenda kunzvimbo huru dzekumba mukati meJapan.
TOKI AIR yakasarudza Radixx semuchina wayo wezve tekinoroji nekuda kwekuvapo kwayo kwakasimba mukati meJapan pamwe nekugona kwayo kusangana nendege yekumisikidza nguva. Sechikamu chekubata, TOKI AIR inotora mukana weiyo yakazara Radixx chigadzirwa suite inosanganisira Radixx ezyCommerce, Radixx Res, Radixx Go, Radixx Go Kubata, uye Radixx Insight. Kugamuchirwa kweiyo yakazara suite kunogonesa iyo yendege kuvhura kutengesa neazvino mhinduro uye kutyaira kugona kubva kutanga kwekushanda.
"Isu takafadzwa nechimwe nechimwe chema demos echigadzirwa atakaona maererano nenguva dzekupindura nemaitiro anoshanda anozobatsira kutanga mashandiro e ndege," akadaro. Masaki Hasegawa, Mumiriri director, TOKI AIR. “Tinotenda kuchikwata cheSaber neRadixx nekuzvipira kwavo kusangana nenguva yedu yekushandisa. "Tinotenda kuti tsoka yavo muJapan pamwe chete neupamhi hwezvigadzirwa zvakatitendera kuti titange nzira inonakidza kuenda mberi naSaber neRadixx chigadzirwa suite sevatinosarudza tekinoroji."
Kuratidzira ayo e-commerce zvinopihwa, TOKI AIR inoshandisa Radixx ezyCommerce internet booking injini inosanganisira yakazara zvakazara yeTravel Agency Portal iyo inozoshandiswa nevemunharaunda vafambi vekufamba. TOKI AIR inochengetedza yakakwira mwero wekutonga pamusoro pekumaka kwavo pamhepo uye inopa vachishandisa iyo Radixx ezyCommerce Yemukati Management Sisitimu.
TOKI AIR ichaenda ichirarama pane iyo Radixx Res yevatakurwi yemasevhisi sisitimu yakagadzirirwa kugadzirisa marongero ekutengesa uye kutendeuka, nekutengesa kwakavakirwa mukati, zvichigonesa manejimendi manejimendi yendege uye kukosha-kwakawedzera masevhisi. Iyi pfungwa yepakati inobvumira iyo ndege kuti ikurumidze kumisikidza mari uye zvinopihwa zvinopihwa pamwe nekugadzirisa mashandiro anoita kugona. Iyo yemazuva ano, intuitive interface inotsigira kwavo kudiwa kweviri-mabheti mavara, achivandudza iyo mumiririri ruzivo.
Radixx Go yekusiya masevhisi suite uye Radixx Go Bata nharembozha mhinduro ichagonesa TOKI AIR kushandura yayo yekutarisa-mukati mashandiro kunhandare yendege uye nyore nyore kuwedzera kugona panguva yepamusoro mwaka vachishandisa vanofamba-famba vamiririri. Pamwe chete, iyo yekuenda masevhisi desktop uye nharembozha zvinobatsira kugadzira inoenderana nendege ruzivo kune vafambi.
TOKI AIR inoshandisa Radixx Insight kuzivisa uye analytics chishandiso kuita zvine mutsindo uye zvine musoro bhizimusi sarudzo mune chaiyo-nguva.
"Tinofara kuwedzera hukama hwedu hunokosha muJapan uye tinogamuchira TOKI AIR kunharaunda yeSaber neRadixx," akadaro. Chris Collins, mukuru mutevedzeri wemutungamiri uye maneja maneja weRadixx. "Tinodada kupa kambani yendege yavo nehunyanzvi hunotungamira indasitiri uye takazvipira zvakanyanya mukuita kuti ishandiswe isina mutsindo uye voenda kunorarama kunhandare yendege yavo."
Pamwe chete, Saber naRadixx's yakasimba yekufambisa chikuva ichapa iyo ndege imwe-yekumira shopu mukupa uye kuronga manejimendi kuburikidza nekuzadzikisa uye post-ndege mashandiro.
TOKI AIR yakashanda nendege yekuyedza kubva kuTokyo Narita Airport kuenda kuSado Airport muna Chivabvu 24, 2021. TOKI AIR inoronga kuvhura kutengesa munaKurume 2022 uye kutanga mashandiro eendege kusvika pakati pa2022. Ndege inorongawo kuwedzera bhizinesi rayo rekutakura neATR Cargo Flex ndege.
Saber Corporation ikambani inotungamira yesoftware uye tekinoroji inopa masimba indasitiri yekufamba yepasi rose, ichishandira makambani mazhinji ekufambisa anosanganisira ndege, vatengesi, vamiririri vekufamba nevamwe vanotengesa. Iyo kambani inopa kutengesa, kugovera uye kugadzirisa mhinduro dzinobatsira vatengi vayo kushanda zvakanyanya, kutyaira mari uye kupa zvakasarudzika vafambi zviitiko. Kubudikidza nemusika wayo unotungamira wekufamba, Saber inobatanidza vanopa zvekufambisa nevatengi vanobva kutenderera pasirese. Sabre's tekinoroji chikuva inobata inodarika madhora mazana maviri nemakumi maviri emadhora ekufambisa kwepasirese anoshandisa gore rega. Inotungamirwa muSouthlake, Texas, USA, Saber inoshandira vatengi mune dzinopfuura 260 nyika kutenderera pasirese. Kuti uwane rumwe ruzivo shanya www.netson.com.
Yakavambwa muna1993, Radixx, inotungamirwa muOrlando, Florida, inosanganisa hunyanzvi hwekuita tekinoroji nemhando dzakasiyana dzekudyidzana dzinogonesa ndege dzese saizi uye emabhizinesi mamodheru kuti ave vatengesi vanobudirira uye vanoshanda zvine hunyanzvi. Radixx inopa kune LCC uye ULCC nendege, kusanganisira kutsigirwa kwekuparadzirwa kweGDS. Radixx inopa yepasi rose kirasi yeInternet Booking Injini, Radixx ezyCommerce ™, gore-based Passenger Services System, Radixx Res ™, uye inotungamira Departure Services Suite, Radixx Go ™, yakasarudzika yakagadzirirwa kugonesa ndege kuti dziwedzere purofiti yavo uye kuwedzera kugadzirwa kuburikidza yakawedzera masevhisi ekuparadzira. Kubva 2016, Radixx yakaendesa chizvarwa chechitanhatu, Micro-services-based passenger services system. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Radixx, ndapota shanya www.radixx.com.
Yakagadzwa mu2020, TOKI AIR inotakura yakachipa yakabatana yakasimbiswa neNiigata Chamber of Commerce neNiigata Association yeVashandi veKambani. Ndege nyowani inotarisirwa kushandisa ndege dzeATR munzira dzinoyevedza senzvimbo yeKansai, Nagoya, Sendai, neSapporo. TOKI AIR inoronga kutanga mashandiro muna 2022. Uye TOKI AIR inoronga nzira nyowani yakabatana SADO-chitsuwa neTokyo.